Nagu saabsan | Hebei Huasheng Felt Co., Ltd.
Hebei Huasheng Felt Co., Ltd. waxaa loo aasaasay shirkad ganacsi oo heer sare ah oo dhar-dumis ah, dhar aan xirnayn 1970, waxayna ku taalaa Nangong & Shijiazhuang, China. Waxaan nahay laf dhabarta warshadaha dharka dusha ka sameysan ee Shiinaha, iyo soo-saareha loogu talagalay soo-saareyaasha soo saara Shiinaha ee Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380). Oo ay ku jiraan shirkada soo dejinta iyo dhoofinta: SJZ SINO-SAINT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, alaabada waxaa loo dhoofiyaa adduunka oo dhan.
Daboolaya aag ah 11,000sqm isla markaana leh 2 dhir, waxaan hada inta badan soo saareynaa 3 nooc oo wax soo saar:
Mid ka mid ah, Cirbadda feedhka ayaa la dareemay, oo ay kujiraan dareeraha polyester, dhogor dareemay, acrylic dareemay, fiitamiin dareemay, dareeraha kaarboonka dareemaya, PP wuxuu dareemay, guluubka gubashada dareemay, ololka biyaha dareemaya, iwm.
Laba, dhogorta dhogorta leh ayaa la dareemay, oo ay ku jiraan xaashiyo dhogor ah, dhogor la dareemay oo duudduuban, dhogor dhogor dareemay, iwm.
Saddex, Alaab-soo-saarka, oo ay ku jiraan PVC dhibic anti sl sl dareemay, singeing dareemay, daabacan dareemay, boorso dareemay, dahabka dareemay, iwm.
Shirkadeena waxay qalabeysay khadad wax soo saar oo horumarsan sida ay qabaan kuwa caalamiga ah
heerarka. Waxay leedahay goynta laser, staming, singeing, dipping iyo qalab kale oo lagu farsameeyo. Qalabka tijaabada waxaa ku qalabeysan mashiinka awooda dijitaalka, qalabka fiber elektronikada, kala sooca, iwm, kaas oo si buuxda u dammaanad qaadaya in alaabada la waafajinayo Midowga Yurub iyo Mareykanka.
Ilaa hada, shirkadeena ayaa ka gudbisay ISO9001 iyo ISO14001 shahaadooyinka tayada caalamiga ah iyo maaraynta deegaanka. Dhammaan alaabooyinka oo dhanna waxay ka gudbeen shahaadooyinka CE, RACH, RoHS, iwm by TUV, SGS.
Awoodda OEM / ODM ee aadka u sarreeya, tayada tayada leh, naqshadaha hal-abuurka leh, qiimo tartan iyo adeeg la isku halleyn karo, waxaan ku guuleysanay amaanta guud ee bulshada dhexdeena ah. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, nala soo xiriir hadda.
Bandhigga & booqashada macaamiisha